ယနေ့တွင်ကြှနျုပျတို့ကို Call! 1.800.519.1222|info@econofrost.com
အမဲသားကို့ Prep အခန်း
Shopper Access ကို
ရွယ် Payback ဥပမာ
ညမျက်နှာဖုံးများ vs Glass ကိုတံခါးပေါက်
Econofrost ယက်လူမီနီယံညဥ့်အဖုံးများ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းရန် on open refrigerated display and freezer cases. Independent third-party testing has found that refrigeration blinds can save up to 36% of the energy consumed by your case for every hour they are used, and refrigerated products remain at lower temperatures for up to 15 hours after the night shields are opened. Reductions on compressor power and refrigeration load are also realized when Econofrost night covers are used.
စွမ်းအင်ထိရောက်မှု & ကိစ္စတွင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်
အောက်ပိုင်း utility ကိုဥပဒေကြမ်းများ & လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ
နှစ်ပေါင်းတာရှည်ခံ & နောက်ဆုံး